အဖြူရောင် ဟက်ကာများ အလိုရှိသည် - MYSTERY ZILLION
အဖြူရောင် ဟက်ကာများ အလိုရှိသည်
November 2008 edited November 2014 in MZ's Pick
ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး ရွေးထုတ်ချင်တဲ့ ပို့စ်ကတော့ "အဖြူရောင် ဟက်ကာများ အလိုရှိသည်" ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့စ်ကို စဖွင့်တဲ့သူကတော့ Orbs.7 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ကိုယ့် email ကို Hack အလုပ်မခံရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို ဆွေးနွေးသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Online အသုံးပြုသူတွေအတွက် email ဆိုတာ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒီလို မရှိမဖြစ် email ကို ဘယ်လို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ မသိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေကလည်း တော်တော်ပြည့်စုံတာတွေ့ရတဲ့ အတွက် ရွေးထုတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
[URL="http://www.mysteryzillion.org/discussion/1556/အဖြူရောင်ဟက်ကာများအလိုရှိသည်/p1"]အဖြူရောင် ဟက်ကာများ အလိုရှိသည်[/URL] ကို ကလစ်ခေါက်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
404 ဖြစ်နေပါတယ် လင့်က ။
November 2014 edited November 2014 Administrators
I just fixed the URL. It was very old thread when we were using different forum software. And those members from that thread were no longer active here for many years ago.